Canada a destination for sex tourists, US State Department's report says |
Location: musha » Kutumira » Newsletter » Canada inzvimbo yevashanyi vebonde, mushumo weUS State department unodaro
Canada inzvimbo yevashanyi vebonde, mushumo weUS State department unodaro
Canada inofanira kuita zvakawanda kusunga nekutongera vanhu vanotengesa vanhu avo vakabatsira kuita kuti nyika ive "yekushanyirwa pabonde" kune vashanyi vekuAmerica, gwaro rehurumende yeUS rakaburitswa Chitatu rinoratidza.
Dhipatimendi reUS State ra2008 reKutengesa muVanhu Rinoongorora kuyedza kwehurumende kudzora kubiridzira munyika zana nemakumi matatu nematatu.
Kutaura kwekuti Canada inzvimbo yevashanyi vebonde kunobva pamishumo kubva kumasangano asiri ehurumende, akadaro mushumo.
Kushanya pabonde kuri kunetsa nekuti kazhinji kunosanganisira kushandiswa kwevanhu, kunyanya vakadzi nevana, vanomanikidzwa kupinda mubhizimusi repabonde.
Canada inzvimbo, yekufambisa uye yekuenda nyika yevatengesi, akadaro mushumo, asi haina kupa nhamba dzakananga. Yakati varwi vanosvika kuCanada vachibva Thailand, Cambodia, Malaysia, Vietnam, South Korea, Russia neUkraine.
Vasikana nevakadzi vemuCanada, vazhinji vacho vari vechivanhu, vanotengeswawo munyika kuti vashande mukuita bonde-kwemari, mushumo wakadaro.
Chirevo chakati Canada ichiri kusarira mukusimbisa zvirongwa zvekurwisa kutengeswa kwevanhu asi yasangana nematanho epasi rose ekurwisa dambudziko iri.
"Mukati megore rapfuura, Canada yakawedzera kudzivirira kwevadziviriri uye kudzivirira, asi yakaratidza kufambira mberi kushoma pamabasa ekuchengetedza mutemo kune vanopara mhosva," akadaro mushumo.
Kune vanopfuura zana veCanada vanopomerwa mhosva yekubata vana zvisirizvo mune dzimwe nyika, asi vanhu vaviri chete ndivo vari kumhan'arirwa muCanada, nhamba dzehurumende dzeCanada dzataurwa mumushumo dzinoratidza.
Chirevo chinokurudzira Canada:
Shanda nesimba kuti uongorore, kutongesa nekutongesa vatengesi.
Shanda nesimba kuti uongorore nekutongera vanhu vemuCanada vanofungidzirwa kuti vakapara mhosva dzekushanyirana pabonde kwevana kunze kwenyika.
Wedzera kurwisa kwevakadzi uye zvimwe zvinoitwa nemapurisa.
Natsiridza kuchengetedzwa uye masevhisi evatorwa vanotengesa zvisiri pamutemo.
Kubiridzirwa kwevanhu kunosanganisira kukwezva kana kubiwa kwevanhu - zvikuru vakadzi nevasikana - pamiganhu yepasi rose kana munyika dzavo kuti vashande mukutengeserana kwepabonde kana zvimwe zviitiko zvinosemesa zvevashandi.
US inofungidzira vangangoita zviuru mazana masere, vanhu vanosvika hafu yavo vana, pagore vanotengeswa pamiganhu, asi mamwe mamirioni anotengeswa mukati menyika dzawo.
“Gore rino, mamirioni evarume, vakadzi nevana pasi rose vanozoparadzwa hupenyu nevanotengesa vanhu. Uranda uhwu hwemazuva ano hunokatyamadza hana dzenyika dzose dzakabudirira, ”Munyori weHurumende yeU.S.Condoleezza Rice akanyora munhanganyaya yemushumo.
Sangano reInternational Labour Organisation rofungidzira kuti kune vanhu zviuru gumi nezviviri nemakumi matatu vari mumabasa ekumanikidzwa pamwe nehurume hwepabonde apo kumwe kufungidzira kuri pakati pemamiriyoni mana kusvika pamamiriyoni makumi maviri nemanomwe.
Kanadha VaCanada Condoleezza Rice Sangano Rice Rashiya
Tourism muvhiki ino muLatin America
Croatia inoshambadza vashanyi veCzech nechirambidzo chekudya
Ghana inovhurazve miganhu, inosimudza mazhinji eCCIDID-19...
Ryanair CEO: Airfares ichakwira zhizha rino
Kuderedza Kunonoka Mukuona Zvirwere Zvakaoma Zvemapapu
Shanghai yakaraira mukati mekuvhara kukuru kweguta rese
Dosimetry Market yakagadzirirwa kurekodha kukosha kwemusika kweU ...
Russia inorambidza ndege dzeBritish kubva mumhepo yayo
Deal chiitiko munharaunda yekufambisa uye yekushanya yakavandudzwa ne...
Global Dairy Processing Equipment Soko Saizi Ndiyo...
Shangri-La inodyidzana neMake-A-Wish International
New Update paInoshanda Therapeutic Against Aggressive...
Starbucks iri kusiya Russia zvachose
Chishandiso Chitsva cheDrug kune Varwere vane Follicular...
Epic gomo bhasikoro nzira dzakabatana izvozvi
Particle Board Market Yakakwana Zvigova, Nhoroondo...